A na-ekwutọkarị ya ma na-aghọtahiekarị, email mgbazinye mgbazinye bu usoro ahia ahia zuru ebe nile nke puru inye ROI siri ike, ma oburu na imara ihe ichoro ma kwanye igbe nnabata. Ọ bụrụ na ị maghị ma ọ bụ enweghị mmasị na ịgbazite ndepụta email, nke a bụ lowdown na uru yana isi ihe dị iche iche na echiche.
Mara Ihe dị iche
O di nwute na enwere ike inweta uzo ime ulo ahia site na omume nke ndi n’enye ihe karie ka ha deputa ndi nchikota, ndi na ere ahia adreesị email, ma obu ndi n’ekpere ihu ha. Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha nwere ike inyere ROI marketer aka. Gịnị kpatara ya? Ndị nnata email ahụ enweghị mmekọrịta na nzukọ nke nwere adreesị email ha, ma zipụ onyinye gị.
N'ime afọ iri na abụọ m na-ere ahịa email m chọpụtara na ohere kachasị mma na-abụkarị ịgbazite ezi depụtara ndebanye aha. Nke ahụ bụ, aha email edepụtara nke sitere na mbipụta, ọrụ, ma ọ bụ ngwaahịa nke onye nnata maara, yana ụkpụrụ.
Otu o si aru oru Ntụle Isi
Ndị nwe ndepụta ahụ ga-eziga ndị na-edebanye aha ha ahịa.
Onye na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ maka ọrụ a, na-akwụkarị ụgwọ ihe ruru puku (CPM).
N'adịghị ka akwụkwọ ozi ma ọ bụ telemarketing, ahịa ahụ anaghị ahụ ndepụta ahụ.
N'adịghị ka ahịa inbound, ọ bụ ihe niile banyere imepụta onyinye bara uru, ọ bụghị afọ ojuju.
Nhọrọ ndepụta bụ ihe kachasị mkpa, onyinye na ihe okike na-esochi.
Maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa email aha mgbazinye bụ ụzọ na-agbanwe agbanwe nke na-eto ndepụta nke ndị debanyere aha ha, na-ebu ọkpọkọ ọkpọ ma na-azụ ahịa ozugbo. Ndị a bụ uru ole na ole.
Uru nke mkpakọrịta (ya na onye nwe ndepụta)
Ọnụ Ahịa Nnweta (jiri ya tụnyere ọwa ndị ọzọ)
Ọ bụ Ndenye (ule nyocha ma mee mgbanwe na ụbọchị, ọ bụghị izu)
Mgbapụta ka mma (E jiri ya tụnyere ịgbaso na ịzụta ihe)
Maka ndị nwe ya
Ndị nwe ndepụta na-abịa n'ọtụtụ ụtọ dị ka ndị na-ere ahịa, ndị na-emepụta ihe omume, mkpakọrịta, ndị mbipụta ọdịnala, na ndị na-ede blọgụ. Ihe niile nwere ike ịchọta ọnụ ahịa dị na listi email kwa, n'agbanyeghị ụdị ọzọ.
Inye ego ($ 1-2 kwa onye debanyere aha, kwa afọ bụ ezigbo usoro isi aka)
Control (gịnị, mgbe, onye)
Easy (ọ dịghị ahịa, ahịa, ịgba ụgwọ - ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na a Listlọ Ọrụ Nchịkwa Ọkachamara).
Dị ọcha (iwepụ ihe ọkụkụ ugboro ugboro)
Ikpe na Point
Na-agabiga ịhọrọ ndepụta ziri ezi, ndị ahịa maara ihe anaghịzi ewere ya zuta ihe m obibia. Kama depụta mkpọsa mgbazinye na-enweta ihe okike, lelee mkpọsa a site na Surfline na Rip Curl. Ọ bụ ezigbo ihe atụ nke otu ndị nkwusa nwere ike isi nye ndị debanyere aha ha nweta ngwa ahịa, ọrụ, ma ọ bụ onyinye, ma merie obi ha na usoro a.
Ọdịnihu nke Email mgbazinye
Mfepụta email bụ ihe ịma aka na-aga n'ihu maka ndị na-ere ahịa na ndepụta ndị na-eji ndepụta agbakọ ma ọ bụ zụrụ. N'ezie, ịma aka bụ ma eleghị anya oke ọkụ nke nkọwa. Nke ahụ dịkwa mma. Ọ na-ahapụ igbe ozi maka ndị na-ere ahịa na-achọ ịdabere na onyinye ha nye ndị debanyere aha ziri ezi bụ ndị gosipụtarala mmasị na ndị nwere ike ịnwe mkpa oge, ma ọ bụ chọta ezigbo uru na ohere ahụ.
Tags: ndepụta emailemail mgbazinye mgbazinyendepụtamgbazinye mgbazinye
Daalụ Scott maka nghọta bara uru dị otú ahụ banyere ire ahịa email. Achọpụtara m na isiokwu a mara mma maka ndị ahụ na-amalite ụlọ ọrụ nwere nnukwu ngwaahịa mana ọ bụghị ndepụta ndị ahịa ruru eru ahọrọla ịnọ ebe ahụ.
Echere m na ọ nwere ike ịnye azụmaahịa ahụ ọtụtụ uru, otu n'ime ha, na-esonyere azụmaahịa ndị nwe ya. Ya mere, gbaa mbọ hụ na azụmaahịa nwere aha ọma n’etiti ndị ahịa ha n’ihi na otu a nke ahụ ga - egbu akara gị kama ịnwe ya.
Jikọọ na mkparịta ụka banyere ahịa email na Startups.com Q&A
Gịnị bụ aha Email Rental Agency. Enwere m ndepụta nke ndị debanyere aha 1mill + ma chọọ ịgbazite ndepụta m ma ọ bụ ree ya. Onwere onye nwere ike ịkwado ụlọ ọrụ ga-eme nke ahụ?